Etu esi ahazi ndi otu Social Media | Martech Zone
Ihe omuma ihe omuma a sitere na GO-Gulf.com na aru oru di nma na ichoputa otutu ndi iche ndi otu ndi otu ndi mmadu na-aru oru.
Mụọ ego ole azụmaahịa na-etinye na mgbasa ozi mgbasa ozi ha. Ego ole ka ha were n'ọrụ maka mgbasa ozi mgbasa ozi ha, kedu ụdị ọrụ ndị were mmadụ n'ọrụ na-achọ na ndị ọkachamara na mgbasa ozi mmekọrịta site na nkọwa zuru ezu anyị nwere banyere otu nzukọ si ahazi ndị otu mgbasa ozi mmekọrịta ha. Site na Go-Gulf infographic, Kedu otu otu ndi otu si ahazi ndi mmadu.
Gwuo ntakịrị ihe na infographic a, ị ga-ahụ di na nwunye na-enwu enyo… dịka eziokwu na 13% nke ụlọ ọrụ enweghị obi ụtọ na ngwaọrụ ndị dị. Ma ọ bụ na 45% nke ụlọ ọrụ na-eji usoro mgbasa ozi iji mepụta ndu, mana naanị 13% na-atụgharị mgbanwe! Anyị ka nwere ụzọ iji gaa na ụlọ ọrụ a!
Tags: elekọta mmadụ mediandị ọrụ mgbasa ozinhazi otu